नेपालमा पहिलोपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / नेपालमा पहिलोपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति
नेपालमा पहिलोपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड 10 days ago	0 22 Views
काठमाडौं, नेपालमा पहिलोपटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति शुरु गरिएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएस“गै पाइपलाइनबाट इन्धन आउन शुरु गरेको हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रिमोट थिचेर इन्धन ‘सेन्डिङ’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ‘रिसिभिङ’ गरेपछि परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको हो।
नेपालतर्फ ३६ दशमलव २ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर गरी कूल ६९ दशमलव २ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भई यसअघि परीक्षणका रुपमा पाइपबाट डिजेल ल्याइसकिएको छ। यो दक्षिण एशियामै पहिलो अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) पाइपलाइन परियोजना हो।
पाइपलाइनबाट डिजेल, पेट्रोल ल्याउन थालेपछि यसको प्रविधिबाट सम्पूर्ण सूचना (विवरण) नियन्त्रण कक्षमा जानकारी हुने प्रणाली विकास गरिएको छ। कति आएको, चुहिएको, रोकिएको वा कुनै अवरोध भएमा त्यसको सूचना कम्प्यूटर प्रणालीमा जानकारी हुनेछ। शुरुमा रक्सौल–अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने भनिएकामा भारतीय आयल निगमले रक्सौलको डिपो मोतिहारीमा सारेकाले मोतिहारीदेखि नै पाइप बिछ्याइएको हो। भारतको बरौनीबाट पटना, कानपुर, सेवान, मोतिहारी हु“दै अमलेखगञ्जमा इन्धन आउनेछ। पाइपलाइन शुरु भएपछि दुई देशको सीमामा हुने अन्य तनाव वा सवारी जामले आपूर्तिमा कुनै अवरोध गर्नेछैन। पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन थालिएपछि प्रदूषण कम पनि हुनेछ।
पाइपलाइनलाई प्रथम चरणमा अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म जोड्न ‘फाष्टट्रयाक’को आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन भइरहेकको निगमले जनाएको छ। पाइपलाइन निर्माण, डिपोनिर्माण तथा जग्गा खरिद आदि कार्यलाई छुट्टै परियोजनाको रुपमा संरचना, कार्यविधि आदि बनाई व्यवस्थित तबरबाट अघि बढाइने तयारी भएको छ।
एलपी ग्या“स तथा प्राकृतिक ग्या“सको पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा चीनको केरुङदेखि त्रिशुली वा धादिङसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइने निगमले जनाएको छ। परियोजना निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच २०७२ भदौ ७ मा हस्ताक्षर भएको थियो। सन् २०१५ अगष्ट २५ मा भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगमबीच सम्झौता भएको थियो। नेपालतर्फ २०७५ वैशाखदेखि पाइपलाइन बिछ्याउन शुरु गरिएको थियो। ७ मार्च २०१८ मा सम्पन्न हुने भनिएको यो परियोजनाअन्तर्गत पाइप बिछ्याउने कार्य ३० जुन २०१९ मा सम्पन्न भएको थियो।
मूल सडक (हाइ–वे) र अप्टिकल फाइबरस“गै जमिनमुनि साढे दुई मिटर गाडिएको यो पाइप बिछ्याउने परियोजनाको हालसम्मको खर्च भारतीय पक्षले व्यहोरेको छ। परियोजनाको कूल बजेट भारु २७५ करोड रहेकामा भारु ७५ करोड नेपालले व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो। दूरी बढेपछि यसको बजेट बृद्धि भई भारु ३२४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत अमलेखगञ्ज डिपोमा रहेका चारवटा भण्डारण ट्याङ्कीलाई रेक्टोफिटिङ गरिएको छ। यसमा दुईवटा चार हजार एक सय किलोलिटर र दुईवटा तीन हजार नौ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमताका छन्। भण्डारणस्थलमा आगलागी नियन्त्रणका लागि ठूला–ठूला पानीका पाइप बिछ्याइएकोे छ। ‘टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इन्स्ट्रमेन्टेसन’, ‘केबुलिङ’ पनि गरिएको छ। सोही स्थानमा २४ वटा ‘लोडिङ बे’ प्रयोगशाला बन्ने प्रक्रियामा छ।
भारतसगको सम्बन्ध महत्वपूर्णः प्रम ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले भारतस“गको सम्बन्धलाई ठूलो महत्व दिएको बताउनुभएको छ। पाइपलाइन परियोजनाको उद्घाटनपछि उहा“ले सिंहदरबारबाट ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’मार्फत सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नया“ उचाइ“मा पु¥याउन नया“ जोश, गतिशीलता र दिशा प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
अत्यन्त खुशी छुः मोदीसोही अवसरमा नया“ दिल्लीबाट ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’मार्फत सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तोकिएको समयमै पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न भएकामा आफू अत्यन्त खुशी रहेको बताउनुभयो। उहा“ले भन्नुभयो– ‘म अत्यन्त खुशी छु, दुबै मुलुकको संयुक्त प्रयासमा परियोजना सम्पन्न भएको छ।’ भारत र नेपालबीच सदियौंदेखि जनस्तरमा पारिवारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको औंल्याउ“दै उहा“ले नेपालको विकास प्रयासमा भारतको सधैं साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो।
मूल्य कटौतीः उपभोक्तालाई राहतनेपाल आयाल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गरी मंगलवार मध्यान्ह १२ बजेदेखि लागु हुने गरी डिजेल÷मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु दुई÷दुई रुपैया“ घटाएको छ। मूल्य घटेस“गै प्रतिलिटर डिजेल÷मट्टितेल रु. ९५ र पेट्रोल रु १०७ कायम भएको छ। यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु. १०९ र डिजेल÷मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. ९७ थियो। पाइपलाइनका कारण ढुवानी खर्च जोगिने भएपछि स्वचालित प्रणालीमा भाउ बढेमा कम प्रतिशतमा बृद्धि हुनेछ। पाइपलाइनबाट इन्धन भियाउन थालेपछि वार्षिक रु. दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च बचत हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
Previous: डेंगु नियन्त्रण गर्न सचेतना ¥याली
Next: कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान शुरु